I-AniMangaWeb ne-Banzai Comics | Izincwadi Zamanje
Isihloko sezihloko ze- manga ESpain lena enezinhlansi, sekuvele kunabaningi asebengene emkhankasweni wokushicilela ama-manga ezweni lethu, ama-greats avaliwe abenalo lolu hlobo lokushicilelwa njengomugqa owodwa wokuhlela phakathi kokwethulwa kwabo okuningi. Manje sekuvela abamemezeli abaningi abancane abaqala ukuzama ukwenza indawo yemakethe. Kepha lokho kuvame ukuholela ekungaqondisisini, futhi lokhu kungaboni ngaso linye kubhekane ngqo. Yilokho okwenzekile phakathi kwalabo be-AniMangaWeb nomshicileli Banzai Amahlaya. Funda ukukhishwa kwabezindaba okokuqala futhi uzoqonda:
I-AniMangaWeb Mangazine izalwe esikhathini esingaphezu konyaka esedlule ngomdlandla futhi ithembisa okuningi, ikakhulukazi ngenxa yokwamukela okukhulu ukukhishwa kwayo kokuqala ngabalandeli. Umagazini wokuqala ukubhekana noManga ngombono wokuqonda uye wakhula kancane kancane, kepha awukaze uzihlukanise "nezinkinga ezithile" zabasizi emkhakheni wokuhlela, okufanele ngandlela thile ukuthi ihlelwe yiBanzai Comics.
Kube nezinkinga eziningi lo magazini ozidalile ngenxa yokusebenza okungenzeka kube yinhlekelele yomxhumanisi nabaphathi balo magazini, njengoba ukusatshalaliswa cishe okungatholakali, ukubambezeleka, izinguquko kwikhwalithi yokushicilelwa ngaphandle kokubonisana noma ukugunyazwa, kanye nokuhambela inombolo engapheli amaphrinta, onke anezaba ze-motley "umkhokha omubi".
Kusukela ngoJanuwari 4, 2008, kufinyelela ekwazini kwethu ukuthi abanye abaphrinta abaqashwe yile ndlu yokushicilela kuye kwadingeka ukuthi baphendukele enkampanini yomshuwalense wesikweletu iCrédito Caución, okungukuthi, abafuni ukubakhokhela imikhiqizo esivele ilethwe, noma ngisho nasezivumelwaneni ezithile ukukhokha okungathandeki ngokweqile kubaphrinta okukhulunywa ngabo.
Ngakho-ke, sithatha ukuthi umkhondo womshicileli oshiwo, wokuphathwa kabi komthengi ngokuhlukahluka kwakhe njalo kwezimfanelo nezakhiwo ezishicilelwe kuhlobene nokutholakala kwethu kwakamuva. Kusukela kulo mzuzu kuqhubeke, sifuna ukukubeka kucace ukuthi iqembu le-OxigenStar, elinoJose Antonio Gómez noJulio Lleonart abaholayo, lizihlukanisa ngokuphelele nendlu yokushicilela yeBanzai Comics, ngoba asifuni izikhalazo ezibhekiswe kumshicileli walezi zinkampani futhi Abathengi bawela kuwebhusayithi nakumagazini okunikelwe isikhathi esiningi nomzamo omkhulu.
Ukucinga enye indlela yokuhlela sekuqalile okuzokwenza ukuthi umagazini ufike, kulokhu, ngesikhathi nangendlela ehloniphekile, iphepha, njll.. Kumazibuko akho, amakhaya (ababhalisile), njll.
Ngokwazi kwabafundi bethu, i-AniMangaWeb Staff kanye nabasebenzisana nabo yibona ababhala, bahlanganise futhi balungiselele i-100% kamagazini, kube ngumsebenzi womshicileli ukunyathelisa nokusabalalisa ezweni lonke, okubonakala sengathi yilokho okwehlulekile izinombolo ezi-6 esezivele zishicilelwe, zidala ukubambezeleka, izinto ezingasasebenzi nezingaphezulu, njll.
I-AniMangaWeb Mangazine ayizimisele ngokuvala, kepha kunokuba ibe ngumagazini wama-manga ngokwenza kahle eSpain, kepha uma ukukhishwa okulandelayo kubambezeleka isikhathi eside kakhulu, ngomhleli omusha, ingxenye elinganayo yabo bonke ababhalisile abakudingayo lokho kuzobuyiselwa. kucatshangelwa izindleko ezitholwe ku-OxigenStar Group, njengoba bekulokhu kwenziwa kuze kube manje.
Futhi njengenjwayelo, kufanele unikeze zombili izinhlobo, izolo lezo ze- Banzai Amahlaya baphendula ngezabo web ngale ndlela:
Umhleli weBanzai ufuna ukukubeka kucace ukuthi, noma kunjalo, bekungeyona intando yabo ukuyeka ukuqhubeka nokushicilela i-Animangaweb Magazine.
IBanzai Editorail ibilokhu ikusekela ukushicilelwa okungasekho, inika ukwesekwa kwayo ngezikhathi ezimbi nasezikhathini ezimnandi zomagazini, igqamisa ngaphezu kwabo bonke ubuhlobo obuhle kakhulu neqembu ebelikhiqize kuze kube manje. Ukutshalwa kwemali okwenziwe kukhulu, kucatshangelwa izindleko ezinkulu enkampanini, ebikhetha ukuxhasa amaphrojekthi ngentshiseko kunezinzuzo zomnotho.
Ngaphandle kokulahleka okukhulu okudalwe yilo magazini, umshicileli ubesabheja kuwo, nanamuhla (izolo). Futhi bengivele ngilinde ukulethwa kwenombolo entsha yokushicilelwa, obekufanele iphume kungekudala.
Kodwa-ke, futhi ngaphandle kwakho konke ukwesekwa kwezokuziphatha, ezobuchwepheshe kanye nezomnotho okwenziwe kulo nyaka omude, uthole mayelana "nokudluliswa kobudlelwano" ngabezindaba nabangaphandle, ngaphandle kwabasebenzi bakamagazini bexhumene noMhleli Banzai.
Kusuka kuBhlelii Banzai sifuna ukudlulisa ukuzisola kwethu ngokuvalwa kwalo magazini, kodwa ngaphezu kwakho konke ngamafomu angenalutho ekugcineni kobudlelwano phakathi kwezinhlangothi zombili.
Okokugcina, kusele ukufisela iqembu le-Animangaweb Magazine inhlanhla esigabeni sabo esisha sobuchwepheshe kwenye indlu yokushicilela.
Indlela ephelele ye-athikili: Izincwadi Zamanje » Literatura » eziningana » I-AniMangaWeb ngokuqhathanisa namaBanzai Comics
Ukufunda ukudweba ompetha